#Tababarahe Jose Mourinho ayaa qiray in Henrikh Mkhitaryan uu uhayaami doono kooxda Arsenal | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Tababarahe Jose Mourinho ayaa qiray in Henrikh Mkhitaryan uu uhayaami doono kooxda...
#Tababarahe Jose Mourinho ayaa qiray in Henrikh Mkhitaryan uu uhayaami doono kooxda Arsenal
Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in maqnaanshaha Henrikh Mkhitaryan uu ka maqnaa kooxda Manchester United habeenkii isniinta taasoo hoos u dhigtay mustaqbalkiisa kooxda.
Mkhitaryan ayaa lala xiriirinayay inuu u wareegayo bisha Janaayo, Arsenal ayaana u muuqata inay tahay meeshii ugu macquulsaneyd inay aragto Badalka Alexis Sanchez xagaaga soo socda.
United ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay u ogolaato Mkhitaryan inuu ku biiro Arsenal, iyadoo Ermeniyaankan aysan meelna uga bananeyn kooxda ka dhisan Stoke.
Mkhitaryan xitaa kuma jirin kursiga keydka, inkastoo Mourinho uu hore u sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe uu ka ciyaari doono ciyaarta lala ciyaarayo Potters.
Mourinho ayaa sharraxay: ‘Waxaan been sheegi lahaa hadii aan idhaahdo inay aheyd go’aan xeelad ah.
Waxaa ay aheyd doorasho aynu dooraney ciyaartoyda aan ognahay,In xilligan, waxaa Maskaxdooda ku jira ay tahay boqolkiiba 100 Manchester United in ay uu ciyaaran.
‘Shaki kuma jiro Mustaqbalka. Uma maleynayo inay u fududahay ciyaaryahan inuu ciyaaro marka uu jiro shaki ku saabsan mustaqbalkiisa.
“Waxaay sareysa cadaadis dheeraad ah in ciyaaryahan uusan u baahneyn koox la ciyaarsiyo, sidaasi darteed waxaan u maleynayaa inay u fiican tahay isaga iyo anaga, halka shaki uu ku jiro xaladda hadda, si loo ilaaliyo.
“Mkhitaryan ayaa arkay magaciisa inuu hoos u dhac ku yimid United bilihii u dambeysay iyadoo Mourinho uu ka walwalsan yahay inuu diirada saaro taam ahaanshihiisa iyo taam ahaanshiha kooxda.
Haddaba 28 jirkaan waxaa u ciyaarey afar jeer xilli ciyaareedkii hore ka dib markii uu seegay shantii kulan ee ugu danbeysay.
Laakiin sida laga soo xigtay El Mercurio , heshiis ay wada gareen arsenal iyo ManUnited ee4 ahaa la soo waregista Alexis Sanchez ayaan la dhameystirii kariin haddi aysan heshiska lagu soo darin xidigaan rer ermeniya ah,
Ilo xog ogaal ah ayaan sheegay in aan gaarin go’aan wali sababtoo ah go’aanka United ee ku aadan heshiiska Mkhitaryan oo aan dhameystirnen.
Mid kamid ah, wararka ay heshay Saxafadda Falanqeysa Ciyaaraha ayaa waxay sheegeen in xaqiiqo ahaan ay Man City ka quusatey inay lasoo wareegto wiilkii ay ku baadi goobeysa xagaagii hore 60 Malyuun ka hor inta aysan ku fashimin
Sikastaba, Arsenal, ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay war ay kasoo saarto mustaqbalka Sanchez, islamarkaana wiilkaan uu sii joogayo Emirates ama uu ku biiri doono Old Trafford kooxda ku dheesha.
Macalinka Arsenal, ee Arsena Wenger, ayaa wuxuu xaqiijiyey in kooxdiisa ay raadsan doonto isla bishaan Janaayo bedelka Sanchez, hadii wiilkaan uu go’aan sado inuu ka tago kooxda Woqoyga London ka dhisan.
Toos Halkan uga Daawo Ciyaaraha Maalin kaste :AxadleDirect.com.